သင်၏အလုပ်များကို GNOME အစီအစဉ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာစီစဉ်ပါ Linux မှ
သင်၏အလုပ်များကို GNOME အချိန်ဇယားဖြင့်လွယ်ကူစွာစီစဉ်ပါ
ငါမကြာသေးမီကသင်မည်သို့ပြောသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းများကို KDE တွင်အချိန်ဇယားဆွဲပါ ၎င်းနာမည်ကြီး Desktop Environment ပါ ၀ င်သည့်စီးပွားဖြစ် tool ကို အသုံးပြု၍ ထိုပို့စ်တွင်ပင် Ubuntu တွင်အလားတူအရာတစ်ခုခုရှိသလားဟုမေးသည်။
Ubuntu သည် GNOME application အများစုကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ယုတ္တိရှိသောအရာမှာ Desktop Environment နှင့်သင့်လျော်စွာပေါင်းစပ်ထားသောကိရိယာတစ်ခုကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ထိုကိရိယာတည်ရှိပြီး GNOME Schedule ဟုခေါ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရမည်။
1 GNOME Schedule ကို Install လုပ်ပါ
2 GNOME Schedule ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
GNOME Schedule ကို Install လုပ်ပါ
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက install လုပ်လိုက်ပါ။ ဒီ tool ကို repositories ကနေတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်တဲ့အတွက် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီး (Ubuntu ၏ဖြစ်ရပ်တွင်):
`$ sudo pacman -n gnome-schedule`
tool ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်ဤကဲ့သို့သော:
GNOME Schedule ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုထည့်ရန်နည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်။
** ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်သောအလုပ် ** အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရမည့်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရွေးစရာများအကြားတွင်ရွေးချယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အချိန်၊ နေ့စွဲနှင့်အခြားသူများကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဤလုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင် crontab တွင်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
** ထပ်ခါတလဲလဲမလုပ်ရသေးသောအလုပ် ** ဤသည်ကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသော်လည်းမကြာခဏမဟုတ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ကြိမ်သာအလုပ်များသည် GNOME Scheduler လည်ပတ်နေသည့်ဖိုင်တွဲမှ (ပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်ဖိုလ်ဒါ) မှအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
** From Template **: တင်းပလိတ်များသည်ယခင်လုပ်ဆောင်မှုများနှစ်ခုထဲမှတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အလုပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ desktop အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့်ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဤသို့လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ပုံကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ငါတို့အလုပ်၏ပရိုဂရမ်သည်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုပြနေသည် အဆင့်မြင့်။ အလုပ်တစ်ခုကိုလည်းရွေးပြီးလိုချင်သည့်အခါတိုင်းဖွင့်နိုင်သည်
ArchLinux ကိစ္စတွင် application ကိုအလုပ်လုပ်ရန် ** cronie ** (KDE post ၌ကျွန်ုပ်တို့ပြပြီးသကဲ့သို့) ကို install လုပ်ရမည်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းသုံးရလွယ်ကူပြီးနားလည်ရလွယ်ကူပါတယ်။ မင်းကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » သင်၏အလုပ်များကို GNOME အချိန်ဇယားဖြင့်လွယ်ကူစွာစီစဉ်ပါ
ငါဖွင့် SUSE အိုင်တီမရှာနိုင် !!!
sudo zypper gnome-shedule ကိုသွင်းပါ
Elav သည် Gnome, Cinnamon သို့မဟုတ် Budgie Desktop ကို သုံး၍ လား။ နောက်ဆုံးတော့: D ...
ဟေ့! အမြန်ဆုံးအောင်ပွဲရဟုမတောင်းဆိုပါနှင့်။ ကျွန်ုပ်သည် GNOME နှင့် KDE / BE: ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာ PC ရှိ Shell သည် GNOME 3.16 တွင်အသစ်သောအရာများကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် KDE ကိုအမြဲတွေ့မြင်ရန်ရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်မင်းမှာ KDE တစ်ခုသာမရှိခဲ့ရင်အပြောင်းအလဲကလာပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်စတင်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကာလတစ်ခုပါ။ XFCE နှင့်အတူတူပါပဲ၊ သင် KDE သို့သင်သွားခဲ့သည် ... ဤနေရာတွင်စမ်းသပ်ပြီး၊ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ D.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ရိုးသားပါက Debian နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ပြီး Jessie ကို Gnome-Shell: D. နှင့်စတင်အသုံးပြုသည်။
@ Petercheco = ငြီးငွေ့ဖွယ် ... .hahaha
UnixTime မှ Normal သို့ကူးပြောင်းရန် command